Ukraine inyika kuEastern Europe. Ukraine muganhu Belarus kuchamhembe kwakadziva kumadokero , Russian Federation kumabvazuva uye kuchamhembe, Porendi, Slovakia uye Hungary kumavirira, Romania uye Moldova kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. The South rweUkraine okumavirira Sea Black uye Gungwa Azov.
Territory rweUkraine ndiko 603,628 km², zvichiita kuti nyika pakukura nekondinendi European. The yakakwirira muUkraine ndiye Mt. Hoverla ari Carpathians, pamwe yakakwirira 2061 M (about 6762 Ft).
On August 24, 1991 paramende Ukrainian vakatanga Act Kuzvimiririra umo paramende akataura Ukraine somunhu yakazvimirira democratic mamiriro. Ukraine ari unitary mamiriro rinoumbwa 24 mapurovhinzi, mumwe zvionera inozvitonga (Crimea).
Ukraine ane nouchapupu zveupfumi zvinogona. Chinokosha kwemauto upfumi hwenyika ndiwo indasitiri. It chinoita mukuru chikamu National mari. Agriculture kunokosha naizvo.
Co-kushanda nesangano renyika zvemari, pamwe International Monetary Fund (IMF), International uye European pemahombekombe rokuvakazve uye kukura (IBRD uye EBRD) kunobatsira kuzozivisa zvirongwa mari Kudzikamiswa uye kukwezva ropafadzo zvikwereti zvedu upfumi munyika.
Ukraine ane kazhinji unozvidzora Continental Climate. Precipitation ari disproportionately richiparadzirwa; zviri soro kumadokero nokumusoro chepasipasi kumabvazuva uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. Western Ukraine anogamuchira kumativi 1,200 millimeters (47.2 mu) pamusoro kunayisa gore negore, apo Crimea anogamuchira kumativi 400 millimeters (15.7 mu). Winters anosiyana kubva muchitonhorera pamwe kweGungwa Dema cold kure kure negungwa. Avhareji yechando tembiricha kubva -8˚C kuti -12˚C (kubva + 17.6˚F kusvikira + 3˚F). In Southern nharaunda yechando tembiricha anenge 0˚C (+320F). Avhareji tembiricha yezhizha: kubva + 18˚C kusvikira + 25c (kubva + 64.4˚F kusvikira + 77˚F) asi panguva yamasikati inogona kusvika + 35˚C (+95F).
Vose uwandu hwevanhu rweUkraine Zvaifungidzirwa panguva 45,426,200 muna January 2014. Guta guru muUkraine ndiye Kyiv (guta rweUkraine). Ukraine ari inogarwa vamiririri 128 marudzi, vemunyika, uye madzinza.
hurumende mutauro rweUkraine ndiko Ukrainian. ChiRussian, waiva of facto mutauro unonyanya Soviet Union, anotaurwa nevakawanda, kunyanya kumabvazuva uye kumaodzanyemba Ukraine. Kune mamwe mapoka vachitaura Crimean-wechiTatar, ChiRomanian, ChiPolish, Hungarian nemimwe mitauro.
chitendero: Vatendi ndezvaJehovha zvitendero zvinoverengeka. Orthodox uye Greek Catholic (Ukrainian Katurike Byzantine setsika) ndivo chikuru.
Hryvna ari National mari rweUkraine. Rwave national mari kubva September 2, 1996.
Modern Ukraine tsika ane zvakawanda wokuRussia uye Belarusian tsika. Zviri zvikuru Zvinonzwisisika sezvo zvose marudzi matatu vane nhoroondo midzi yavo uye kwakatangira kubva Kievan Rus, asi muzana remakore rechi13 vakatanga kukura sezvo munhu marudzi vari ikozvino. History anoratidza kuti ose ruchigona kusika ngano uye nyaya yacho dzakaitika kare. Historical zviitiko dzinowanzoratidzwa zvichishandurwa nenzira vanhu vanoda kuvaona, asi izvozvo hazvirevi kuti iyi ndiyo nzira zviitiko chaiyo akatora nzvimbo.
pamusoro 500 maguta Ukraine akanga inotangwa kupfuura 900 makore apfuura, wo 4,500 misha Ukraine anopfuura 300 zera.
Kupfuura-150 zviuru sezvivako tsika, nhoroondo, uye sayenzi yezvinocherwa mumatongo hunoratidza nhoroondo kunoshamisa wokuUkraine vanhu. 80 % pakati Monuments of Kyivan Rus ichikosha (IX - XII emakore) vari pfungwa munharaunda muUkraine.
The Pavaichera mumataundi yekare Tira, Olvida, Chersonese, Panticapea chomuzana 5th remakore B.C. uyewo zvikuru nhare yakavakwa rechi14-rechi15 emakore nokuda vokuItaly kubva kuGenoa, vanowanwa muna Crimea.
Kupfuurisa 600 mamiziyamu kuzozivisa zvikuru chokwadi uye unhu pamusoro wokuUkraine nhoroondo uye tsika nemagariro.
Ukraine ane zvakaisvonaka uye vakasiyana-siyana jogirafi, okunze, uye yevedza hunhu. Ukraine ushanyi dzaishandisa funga Sea Black uye kuCrimea sezvo nzvimbo yakanaka kukwira makomo, gomo bicycling, dombo climb uye Diving. The Carpathian pamakomo nzvimbo chinyakare nokuda Skiing, makomo uye Kayaking.
kunzvimbo dzakawanda Ukraine ndakaponesa mavambo avo emadzinza. saka vashanyi guru mukana kuzivana nevanhu netsika National, nziyo, vachitamba, uye zvokudya.